စစ်တွေရှိ အိမ်ထောင်စု ၃၀၀၀၀ ကျော် အစိုးရကထောက်ပံ့ကျေးရအုံးမယ်တဲ့ဗျာ…. – အနုပညာရပ်ဝန်း
စစ်တွေရှိ အိမ်ထောင်စု ၃၀၀၀၀ ကျော် အစိုးရကထောက်ပံ့ကျေးရအုံးမယ်တဲ့ဗျာ….
စစ်တွေမြို့ရှိ အိမ်ထောင်စု ၃၀,၀၀၀ ခန့်ကိုတစ်အိမ်ထောင်လျှင် နှစ်သောင်းကျပ်ဖြင့် သြဂုတ် ၂၅ ရက်ကစတင်ထောက်ပံ့နေကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဦးဝင်းမြင့်က ပြော ကြားသည်။ စစ်တွေမြို့တွင် တွေ့ရှိရသော COVID-19 ရောဂါအခြေအနေသည် မည်သည့်ကာလတွင် ပြီးဆုံးမည်ဟု မခန့်မှန်းနိုင်သဖြင့် ဝင်ငွေနည်းပါးသည့် အိမ်ထောင်စုများအတွက် ထပ်မံထောက်ပံ့မည့် အစီအမံများ ရှိကြောင်းလည်း ၎င်းကဆိုသည်။
‘‘ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ရဲ့ ဘတ်ဂျက်ကို အသုံးပြုတာပါ။ သိန်းခြောက်ထောင်လောက်ရှိပါ မယ်။ ဒီနေ့ပဲ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အုပ် ချုပ်ရေးမှူးတွေကို လွှဲလိုက်ပါ ပြီ’’ဟု ဦးဝင်းမြင့်ကပြောသည်။ ထောက်ပံ့မှုအရ မြို့ပေါ်ရပ် ကွက်နေ အိမ်ထောင်စု ၁၅,၁၄၇ နှင့် ကျေးရွာနေအိမ်ထောင်စု ၁၄,၇၆၀ ရှိသည်။ စစ်တွေမြို့ကို Semi Lockdown ချရန် ဆွေးနွေးစဉ်က တည်းက ဝင်ငွေနည်းပြည်သူများ ကို ထောက်ပံ့ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ ကြောင်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုး နွယ်များအစည်းအရုံး အတွင်းရေး မှူး ကိုဇော်ဇော်ထွန်းကဆိုသည်။
‘‘အခု ထောက်ပံ့ပေးမှုတွေ က ဝင်ငွေနည်းပြည်သူတွေ ဆီ တိုက်ရိုက်ရောက်ဖို့လည်း လို တယ်။ ပြည်ထောင်စုကချပေးတဲ့ အစီအစဉ်တုန်းကလည်းကျန်နေ ခဲ့တာတွေကို သင်ခန်းစာယူဖို့ တိုက်တွန်းတယ်။ အခုဖြစ်စဉ်အ တွက်လည်း ကျွန်တော်တို့က စောင့်ကြည့်မယ်’’ဟု ၎င်းကဆို သည်။ စစ်တွေမြို့ခံ တစ်ဦးက ‘‘ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်တာနဲ့ပတ် သက်ရင် ပြီးခဲ့တဲ့အခေါက်လို တော့မဖြစ်စေချင်ဘူး။
အမှန် တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူ တွေစီ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပမာဏ အတိုင်း တိတိကျကျရောက်စေ ချင်တယ်’’ဟု ထောက်ပံ့ငွေပေး အပ်မည့်အပေါ် မှတ်ချက်ပေး သည်။ ပြီးခဲ့သည့် လအနည်းငယ် အတွင်းက ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော အခြေခံပြည်သူများအား ပထမ အကြိမ် ထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်ရာ တွင် အစိုးရသတ်မှတ်သောပမာ ဏအတိုင်း အပြည့်အဝမရရှိသည် များရှိသလို ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသော် လည်း ထောက်ပံ့ငွေမရသူများ လည်းရှိခဲ့ကြောင်း အထက်ပါ ဒေသခံကဆိုသည်။
သြဂုတ် ၁၆ရက်က စစ်တွေ မြို့၌ COVID-19 ပြည်တွင်း ကူး စက်သူတွေ့ရှိပြီး လေးရက်အ ကြာတွင် အစိုးရက Semi Lockdown ချမှတ်ခဲ့သည်။ ယမန်နေ့ နံနက်အထိ စစ်တွေမြို့တွင် COVID အတည် ပြုလူနာ ၇၁ ဦး၊ ဘူးသီးတောင်မြို့ တွင် လေးဦး၊ မြောက်ဦးမြို့တွင် သုံးဦးနှင့် သံတွဲမြို့တွင်နှစ်ဦးတွေ့ ရှိထားသည်။
စစ်တွေမြို့သည် ရခိုင်ပြည် နယ်မြို့တော်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေနှင့် အိမ်ထောင်စု သန်းခေါင်စာရင်း အရနေထိုင်သူ ၁၄၇,၈၉၉ ဦးရှိပြီး မြို့ပေါ် ရပ်ကွက် ၃၂ ခုနှင့် ကျေး ရွာ ၁၁၉ ခုရှိသည်။CREDIT
နှာခေါင်းစီး မတပ် ဘဲ အပြင် ထွက်သွား လာတဲ့ သူ ၄၄ ဦး ကို စတင် အရေး ယူပြီ
“မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အခြေခံပညာအထက် တန်းကျောင်းအားလုံး ယာယီပိတ်မည်”